निर्वाचन पछि पार्टी एकीकरण : वामगठबन्धन (हेर्नुहोस् भिडियो)
राजु पौडेल झापा, मंसिर २ । वामगठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले पार्टी एकीकरण रहर र लहरले नभई देश बनाउने संकल्पका साथ गर्न खोजिएको बताएका छन् । निर्वाचन अघि नै एकीकरण गर्ने प्रयास
ओखलढुंगा, मंसिर २ ।वाम गठबन्धन र नेपाली काँग्रेसको चुनावी सभामा सहभागी हुन कार्यकर्ता चढेको बस तथा जीपलाई लक्षित गरी आज बिहान बम विस्फोट गरिएको छ । सुनकोशी गाउँपालिका–७ च्यानममा बम
विप्लवको पार्टीमाथि प्रहरीको निगरानी, भोजपुरमा ४ कार्यकर्ता पक्राउ
भोजपुर, मंसिर १ । देशका बिभिन्न भागमा उम्मेदवारहरुलाई लक्षित गरेर अक्रमण बढेपछि प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) का नेता तथा कार्यकर्तामाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। यद्यपी सो पार्टीले उम्मेदवारमाथिको आक्रमणमा आफ्नो पार्टीको
झापा–१ मा दुई गठबन्धनबीच कडा टक्कर, यस्ता छन्–उम्मेद्वारका एजेण्डा
झापा, मंसीर १ । झापा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवारले स्थायी शान्ति, दीगो विकास र समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । संवाद समूह
तेह्रथुममा इतिहास जोगाउन र बनाउन चाहनेको प्रतिस्पर्धा
तेह्रथुम,। प्रदेश नं १ को पहाडी जिल्ला तेह्रथुममा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको सरगर्मी निकै तातेको छ । जिल्लाबाट उम्मेदवारी दिएका विभिन्न नेता तथा कार्यकर्ता अहिले मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न
प्रदेश नम्बर ३ मा को बलियो ?
झापा । प्रदेश नम्बर ३ मा दलहरुबीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । पहिले चरणमा पनि केही ठाउँमा हेवी उम्मेदवार भएकाले चासो देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको प्रदेश नम्बर तीनमा
प्रधानमन्त्री देउवा र पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीको रोचक प्रतिस्पर्धा
झापा, कार्तिक २८ । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय पूर्वप्रधानमन्त्री केही आफ्नै पूर्ववत् निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने
बम प्रहारबाट बचेपछि शेरधन राईको अनुभूती : नयाँं जीवन पाए जस्तो भएको छ
झापा, कार्तिक २८ । बिहानको दश बज्दै थियो । हामी ट्याम्के मैयुमा आयोजना गरेको चुनावी सभामा सहभागि हुनका लागि त्यस तर्फ जाँंदै थियो। मेरो गाडिमा एक प्रहरी सहयाक निरीक्षक सहित
चुनाव जितेर मात्रै पार्टी एकता : दाहाल
चितवन, कार्तिक २७ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’ले चुनावअघि पार्टी एकता हुन्छ भन्ने हल्ला निराधार भएको प्रस्ट्याएका छन् । चितवन क्षेत्र नं ३ अन्तर्गत पश्चिम चितवनको चुनावी प्रचार